मेलम्चीको पानी असारमा आउँछ ! – Mero UK
मेलम्चीको पानी असारमा आउँछ !
१ फागुन, काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित खानेपानी आयोजना मेलम्ची कहिले सम्पन्न हुन्छ ? यही प्रश्न वर्षेदेखि काठमाडौंबासीको मनमा खेलिरहेको छ ।
सरकारले पटक–पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्ने मिति सुनाइरह्यो । तर यसअघिका कुनै पनि मितिमा पानी आएन ।
गत दशैंमा त पक्का पानी काठमाडौं आइपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि खानेपानी मन्त्री बीना मगरले सम्म ठोकुवा गरे । तर काम सकिने भनेर तोकिएको मिति अगावै इटलियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम नै छाड्यो ।
सीएमसीले काम छाडेपछि सरकारले अहिले चिनियाँ कम्पनी सीनो हाइड्रोलाई बाँकी काम गर्न जिम्मा दिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारको प्रारम्भिक कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नै भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेशकुमार खत्री बताउँछन् ।
ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले सुरुङतर्फको जटिल मानिएको कामहरु तीब्र रुपमा अघि बढाएकाले लक्ष्यअनुसार आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने उनको दावी छ । बिहीबार समितिले मेलम्ची आयोजनाको बारेमा जानकारी दिन श्वेत पत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
असार महिनामा सुन्दरीजलसम्म पानी खसे पनि काठमाडौंका घरघरमा कहिले पानी पुग्छन भन्ने विषयमा भने अन्योल नै छ । श्वेतपत्र सार्वजनिक पछि मन्त्री बीना मगरले आयोजना कहिले भन्ने विषयमा खुलेर बोलिनन् ।
खानेपानी मन्त्री मगरले बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोजनाको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरिन् । उनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा असारमसान्तसम्म सुन्दरीजलसम्म पानी झर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा, गोल्छाको साथ
सरकारका प्रवक्ता भन्छन् : सरकारको काम नराम्रो देख्ने आँखा चाहिँ नराम्रा !